RBZ Issues Measures To Curb Abuse Of Physical Airtime Vouchers For Money Laundering
Ndazvishairwa Pazvo 7 months ago
Tsoma tsoma naStrive and Econet kkkkk Intelligence iword chete ndazozviona kkkk busy kubvisa uswa muroad iwo matanda akaita mwarara munzira yose achitadzisa michovha kufamba. Rwendo rurefu urwu chokwadi.
Ngazviende hazvo ndabvuma.
Ko kungotaura kt takundikana vanobvei,very soon ichava mhosva kunwa certain amount of drinks or beer kuchinzi mukutambisa mari yet ivo vanoita malarvish party
This intelligence unit seems not intelligent,they must investigate leekages in the mining sector not these minor things,that's bullshit
This intelligence unit seems not intelligent,they must investigate leekages in the mining sector not these minor things,that bullshit
Mdara Odza 7 months ago
The outfit should remove the word "Intelligence" from it's name
Daily prophecy 7 months ago
Kkkk maitadzaka nyika makuma airtime zvaremaka kkk kuswera kugarira nyaya dzema vendor
True some vendors are buying from leading retail outlets for resale on the market and making huge profits out there!
Kkkkkk aaaa rega ndiseke zvangu. Maboss Ehe tinozviziva hedu kut "tumakava tudiki tunopedza munda wemuzambiringwa', but iyika iyi haidi izvozvo work on your policy first if the policy failed every conner of the economy will fail